ရုရှား-စပိန်တို့ကစားမယ့် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ
1 Jul 2018 . 4:33 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲအဖြစ် အိမ်ရှင်ရုရှားနဲ့ စပိန်အသင်းတို့ဟာ ည ၈း၃၀ မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်း ထူးခြားချက်တွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ရုရှားအသင်းရဲ့ ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဇာဂိုယက် Dzagoev ဟာ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်လို့ အသင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥရုဂွေးနဲ့ပွဲတုန်းက အနီကတ်ပြသခံခဲ့ရတဲ့ ညာနောက်ခံလူ စမော်နီကော့ဗ် Smolnikov ကတော့ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် စပိန်နဲ့ပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီး သူ့နေရာမှာ မာရီယိုဖာနန်ဒက်ဇ် Mario Fernandes ပါဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး အဓိက ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂိုလိုဗင် Golovin ၊ စမိုလော့ဗ် Smolo ၊ ဂါဇင်စကီး Gazinsky တို့ဟာ အ၀ါကတ်တစ်ကြိမ်စီ ပြသခံခဲ့ရပြီးဖြစ်တာကြောင့် ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်မခံရဖို့ အခုပွဲမှာ အ၀ါကတ်မထိအောင် သတိထားကစားရမှာပါ။ စပိန်အသင်းမှာတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာမရှိပါဘူး။ ပုံမှန်လက်စွမ်းမရှိလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ဂိုးသမားဒီဂီယာ De Gea ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ဆက်လက်ပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီး နည်းပြဟီယာရို Hierro က ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva ရဲ့ နေရာမှာ ရီးယဲလ်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမား အဆန်စီယို Asensio ကို ပွဲထွက်အသုံးပြုဖို့ ရှိနေတယ်။
– စပိန်အသင်းဟာ ရုရှားနဲ့ နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ (၃)ပွဲမှာ (၁၀)ဂိုး(ယူရို-၂၀၀၈ နှစ်ပွဲမှာ ၇ ဂိုး၊ ၂၀၁၇ ခြေစမ်းပွဲမှာ ၃ ဂိုး)အထိ သွင်းယူခဲ့တယ်။
– နောက်ဆုံး(၂၃)ပွဲမှာ စပိန်အသင်း လုံးဝရှုံးပွဲမရှိဘဲ လက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေထဲမှာ မှတ်တမ်းအကောင်းဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ စပိန်အသင်း နောက်ဆုံးရှုံးပွဲတွေခဲ့တာက ယူရို-၂၀၁၆ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲဖြစ်ပြီး အီတလီကို (၀-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
– ဆိုဗီယက်ကနေ ခွဲထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း ရုရှားအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆုံး ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ယူရို-၂၀၀၈ ပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့် စပိန်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
– ဥရုဂွေးနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၃)ကြိမ်သာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရုရှားအသင်း ၁၉၉၄ နောက်ပိုင်း ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု အနည်းဆုံး အိမ်ရှင်အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၄ တုန်းက အိမ်ရှင်အမေရိကန်အသင်းဟာ ဘရာဇီးလ်နဲ့ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းချက် (၃)ကြိမ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။
Photo:The Independent,Goner News
ရုရှား-စပိနျတို့ကစားမယျ့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲအဖွဈ အိမျရှငျရုရှားနဲ့ စပိနျအသငျးတို့ဟာ ည ၈း၃၀ မှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီပှဲစဉျနဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျး ထူးခွားခကျြတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ရုရှားအသငျးရဲ့ ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ ဇာဂိုယကျ Dzagoev ဟာ တံကောကျကွောဒဏျရာကနေ ပွနျလညျသကျသာလာပွီဖွဈလို့ အသငျးနဲ့အတူပူးပေါငျးနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဥရုဂှေးနဲ့ပှဲတုနျးက အနီကတျပွသခံခဲ့ရတဲ့ ညာနောကျခံလူ စမျောနီကော့ဗျ Smolnikov ကတော့ ပှဲပယျပွဈဒဏျကွောငျ့ စပိနျနဲ့ပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပွီး သူ့နရောမှာ မာရီယိုဖာနနျဒကျဇျ Mario Fernandes ပါဝငျလာဖို့ရှိပါတယျ။ နောကျပွီး အဓိက ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဂိုလိုဗငျ Golovin ၊ စမိုလော့ဗျ Smolo ၊ ဂါဇငျစကီး Gazinsky တို့ဟာ အဝါကတျတဈကွိမျစီ ပွသခံခဲ့ရပွီးဖွဈတာကွောငျ့ ပှဲပယျပွဈဒဏျမခံရဖို့ အခုပှဲမှာ အဝါကတျမထိအောငျ သတိထားကစားရမှာပါ။ စပိနျအသငျးမှာတော့ ဒဏျရာပွဿနာမရှိပါဘူး။ ပုံမှနျလကျစှမျးမရှိလို့ ဝဖေနျခံနရေတဲ့ ဂိုးသမားဒီဂီယာ De Gea ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ ဆကျလကျပါဝငျလာဖို့ရှိနပွေီး နညျးပွဟီယာရို Hierro က ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva ရဲ့ နရောမှာ ရီးယဲလျလူငယျတိုကျစဈကစားသမား အဆနျစီယို Asensio ကို ပှဲထှကျအသုံးပွုဖို့ ရှိနတေယျ။
– စပိနျအသငျးဟာ ရုရှားနဲ့ နောကျဆုံးဆုံတှခေဲ့တဲ့ (၃)ပှဲမှာ (၁၀)ဂိုး(ယူရို-၂၀၀၈ နှဈပှဲမှာ ၇ ဂိုး၊ ၂၀၁၇ ခွစေမျးပှဲမှာ ၃ ဂိုး)အထိ သှငျးယူခဲ့တယျ။
– နောကျဆုံး(၂၃)ပှဲမှာ စပိနျအသငျး လုံးဝရှုံးပှဲမရှိဘဲ လကျရှိကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဝငျအသငျးတှထေဲမှာ မှတျတမျးအကောငျးဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ စပိနျအသငျး နောကျဆုံးရှုံးပှဲတှခေဲ့တာက ယူရို-၂၀၁၆ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲဖွဈပွီး အီတလီကို (ဝ-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။
– ဆိုဗီယကျကနေ ခှဲထှကျပွီးနောကျပိုငျး ရုရှားအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပထမဆုံး ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို တကျရောကျခဲ့တာဖွဈတယျ။ ယူရို-၂၀၀၈ ပွိုငျပှဲတုနျးကလညျး ဆီမီးဖိုငျနယျကို ပထမဆုံးအကွိမျတကျရောကျခဲ့ပမေယျ့ စပိနျကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။
– ဥရုဂှေးနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၃)ကွိမျသာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ရုရှားအသငျး ၁၉၉၄ နောကျပိုငျး ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု အနညျးဆုံး အိမျရှငျအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ ၁၉၉၄ တုနျးက အိမျရှငျအမရေိကနျအသငျးဟာ ဘရာဇီးလျနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခကျြ (၃)ကွိမျသာရှိခဲ့ပါတယျ။